ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Scot Marciel ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Scot Marciel ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် Aida Amazing Co., Ltd. မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Hidenori AIDA ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် Aida Amazing Co., Ltd. မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Hidenori AIDA ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ WIPO File Software မိတ်ဆက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) အချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးကော်မရှင် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင် ဉက္ကဌ၊ စီးပွားရေးနှင့်...
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ပေးမှုနှင့် ITC ကတ်ဖြင့် အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်လာလ ၁၄ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Thursday Talk ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြတ်စိုး မိုးက “Knowledge...
လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ လယ်ယာထွက်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ စီးပွားရေးနှင့်...
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၈:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကရင်ပြည်နယ်၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်...
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထုတ်ပြန်သည့် Doing Business အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Ease of Doing Business Ranking မြင့်မားစေရန် ဒုတိယသမ္မတ (၁)၏ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကာ အရှိန်...